Damaca Kenya ee Kursiga Madaxweyne 2021
Home QORMOOYIN Damaca Kenya ee Kursiga Madaxweyne 2021
Waa aduune oo kolaba leh waayihiisee, kolkii dawladii soomaaliyeed burburtay dalka soomaaliyana uu galay dagaalo sokeeye oo aad u naafeeyay,ayaa waxaa ka faa iidaystay burburkaa iyo dawlad la aanta.
Dawlado shisheeye iyo shaqsiyaad soomaali ah oo u dhago nugul maqlana shisheeyaha isticmaarka ah. Hadaan wax yar is dul taagno dawlad kamid ah cadawga ka faa iidaysanaayay burburkii inagu dhacay dalkeena. Dawlada Kenya waxay damaaciday marka laga soo tago xeryaha ay u ooday soomaalidii ku soo qaxday oo hay adaha gargaarka aduunku kaga kiraysteen dhulkaas malaayiin doolar,marka laga soo tago ganaacsatadii soomaaliyeed oo halkaa maalgashaday,marka laga soo tago jaadka ama maan dooriyaha dalka soomaaliya aysoo galin jirtay oo malaayiin doolar ka heli jirtay,marka faa iidada ay soomaaliya ku qabtay kenya intaa iyo kabadan laga soo tago ayaa hadana waxay damaaciday badeenii in ay si farsamasan ku dhacdo.
Bada soomaaliya ee Kenya boob istiri waxaa ku jira hoos teeda shiidalaaka badaha aduunka ku jira kan uugu badan abid intii bad laga helay shidaal,taana waxaa hore u cadeeyay iyo intii aynu ahayn dawlada 1979 dawlada norwey oo sahamisay. Kenya muday gaatamaysay iyadoo salka ku haysa wadamo reer galbeed oo quudaraynaaya haday kenya hanato badaas in shiidalka ay wax weyn ka helaan. waana wax jira in aduunyada dawladuhu is dhacaan hadii dal uu waayo dawlad difaacda. hadaan intaa ka gudbo.
Kenya fooda waa galin waysay badeena oo ku dhici wayday,xiligii Madaxweyne Cabdiqaasim salaad way ku dhici wayday xiligii Madaxweyne Cabdullahi yusuf waana taariikh cad oo qoran.Kenya waxay ogayd in ragaas aan lamarsiin karin in badeena la dhaco haba haadeen kuwo tabardaran oo dalkoodu lahayn dawlad adag ee. noocay rabeen markii uu kursiga dalkeena yimid maxaa dhacay weeye? waxaa inagu bilawday inbadeenii oo lagu wareejiyay kenya hayada badaha aduunka ee aan xubinta kanahay looga sharciyay kenya!! magaalada NEWYORK ee dalka maraykanka. waxaa sidaa sameeyay ee muranka galiyay badeenii ee heshiiska lagalay kenya waxa uu ahaa habaar qabihii islaamka ku gabaday ee boqolaalka wiil inaga xasuuqay isagoo leh diin baan wadaa! cabdullahi yusuf iyo dawladiisuna waa gaalo. waa madaxweyne sheekh shariif waxaana kaalmeeyay raysalwasaarihiisii cumar cabdi rashiid iyo cabdiraxmaan cabdi shakuur oo intaba ay wadatay kenaya. taariikhdu waa cadahay qaabkay u gateen badeena soomaaliya isaga sheekayn mayno iyo siday u fuliyeen dhagartii kenaya.
Nasiib wanaag waxaa khatartii weynayd iyo dhagartii soomaali laga dhaxal wareejin lahaa badeeda difaacay wadaniyiin soomaaliyeed oo sababay in baarlmaankii dalkeenu gaashaanka ku dhuftay war qadii heshiis ee lagu sheegay is afgarad kenaya iyo dawlada soomaliyeed taasoo lagu dhacay badeena oo la diiwaan galiyay. hay ada badaha aduunka oo dawlado badan xubin ka yihiin oo hoos timaada Unatnationka ayaa baarlamaankeenu kaar siiyay arin ah burin heshiiskaa gabi ahaan tiisba taasoo aduunkii iyo hay adiiba aqbashay kana saartay diiwaan galintii. oo waa tii golaha aduunku ku dhawaaqay in baarlamaanka soomaaliyeed laalay arinkaas taasoo ahayd guul taariikhi ah.
Kenaya xiligii danbiile sheekh shariif waxaa damaceedii difaacay baarlamaankeena. kenaya dhabarkay ka jabtay damaceediina madaxdii waa ka fulay laakiin baarlamaankii ayaa diiday, waxaa dalkii qabsaday oo madaxweyne ka noqday xasan sheekh kenaya markiiba waxay u faraxday si weyn iyadoo arkaysa in marlabaad ay heshay fursad dahabi ah oo ay ku dhici karto bada soomaaliyeed. waxay khaa inu wadankii meesha yimid ka dhaadhicisay in uu fuliyo arinka bada,oo uu geeyo maxkamada aduunka ileen hayada badaha aduunka iyo Unatnationka lama gayn karee!! oo duudmo baarlamaan ayaa taalee. xasan iyo kenaya waxay heshiis ku gaareen in maxkamada lageeyo dacwad maadaama sikale wax loo waayay, waxayna iska dhigeen sidii wax is dacwaynaya oo kale si markaa kenaya u hesho warqad cad oo ah in badii iyada loo xukumay markaa shirqool labaad bay ahayd oo xasan badeena uugu wareejinaayo kenaya.
Badeenii baarlamaanku diiday maxaa inagu qasbay oo dacwad ina geeyay arin la xaliyay oo dhamaatay dhankeena? xasan baaa ina geeyay oo kenaya u adeegaaya iskana dhigaaya in uu badeena difaacaaayo garasho yare heer uu ka joogo iyo aqoon xumo. waxa uuna ku badashay xoogaa doolar ah oo lasiiyay. shariif kadib marlabaad badeenii xasan baa geeyay maxkamad si keenaya u guulaysato. waana taariikh cad oo qoran dunidoo dhan baana og soomaalina waa fahan santahay si fiican kuwaa dalkeena khiyaamay ee cadawga ka sii xun dhab ahaan.
Maanta markii madaxweyne farmaajo guulaystay kenya iyo tigreegii jabay aad bay u naxeen waayo xasan sheekh iyo noocii ay ku adeegan lahaayeen baa meeshii kabaxay oo dad baa yimid dalkooda difaacaya bad iyo bari iyo cirba oo leh qab iyo islawaynan soomaaliyeed. Naxdin uuga weyn kenya iyo tigree lama kulmin hada kahor soobixidii farmaajo. kenya waxay fahantay markiiba inay waayayso damaceedii ahaa inay hab maxkamad ku dhacdo bada soomaaliya,waxaadna markiiba aragteen soomaaliyeey kenya oo ka cararaysa maxkamadii shalay ay u ordaysay oo xasan sheekh u raacday!!! oo aaway kenya maxkamadii ayaa baafinaysa waa carareen,waxayna kenya quudaraynaysaa si bada ay uugu guulaysato in ay sooceliso xasan sheekh iyo kuwaas hotel jaziira ku shiray ee labaxay midawga madaxweynayaal waana khaa inu wadan kenya isku duba ridatay oo mid mid ula balantay si ay haduu guulaysto iyaduna u hesho badii soomaaliyeed. mid kastoo kamid ah nimankaa kenya abaabushay ee raba in ay dalkeena madaxweyne ka noqdaan wuxuu ku jiraa heshiis uu sixiixay oo ah in bada soomaaliyeed uu ku wareejinaayo kenya. ilmaha caruurta ah ayaa taa garanaaya aduunkoo dhan ayaa u jeeda waa iska cadahay.
waalaga la yahay kenya maxkamada imaw aduunkii oo dhan baa yaaban!!! aaway ninkii laga joogi la aa? hadana kenya waxay wadataa qoshe ah in ay kursiga dhaafiso farmaajo oo uu san soo noqon si ay u xalaalaysato bada soomaaliya ee shidaalku hoos ceegaago hadafkeedu waa intaa,waana sababta ururka ka dhigtay musharixiinta oo ah ururkeenaati ku doonaayo in uu ku qabsato soomaaliya. shacabka soomaaliyeed waa baraarugay dawlad iyo dad weyne waa isku duuban yahay waana haystaan madax difaacaysa diinta dadka iyo dalka oo la isku hubo maanta. waxaa laga rabaa shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba in ay xajistaan nicmada iyo dawlad nimada illaahay siiyay kana feejignaadaan shisheeyaha iyo shisheeye kalkaalka.
waxaa sidoo kale xusid mudan in labadan nin ee bukaa ay taagan yihiin afaafka aqalka Madaxweyne farmaajo maanta ilaa maalinkii la doortay waa dhaqan ku cusub soomaaliya oo ugub ah! hadaad jaleecdo Madaxweyne cabdi qasim laguma arag saacad qura albaabka madaxweynihii badalay Cabdullahi yusuf sidoo kale Madaxweyne Cabdullahi yusuf laguma arag albaabka madaxweynihii badalay wax saacad kayar sidaa ayayna ahaan jirtay dawladnimada iyo sharafkuba waligeedba.hadaan anigu fakaray waxaan is iri uun malaha waxa kani waa uun loo maleeyee maha madaxweynayaal ee waa shar meesha uun soomaray oo soomaali looga dhigaayay imtixaan iyo waano.
waxaad maanta aragtaan in ay diideen in shacabku codeeyo oo qof iyo cod wax lagu doorto kadibna nasiibkiis cidii shacabku doortaan ileen shacabku waa garanayaan qofkii u wanaagsan dalkeena ee. waxay yiraahdeen shacabku waxay dooran oo soonoqon farmaajo oo way jecelyihiin sidaa daraadeed marabno in shacab wax doorto!!
Madaxweyne farmaajo iyo dawladeenu waa u tanaasuleen waxaa layiri maxaad rabtaan waxay sheegteen doorasho dadban waa laga yeelay. hadana waxay diideen doorasho dad ban.waqti baan jirin ee bal in bukaanka ay ka yara caafimaadaan waxaan oran lahaa bal doorasho tuurleh halagu fiirsho
Previous articleSomalia oo sheegtay in 40 milyan oo dollar ku bixi doonto doorashada
Next articleArsenal oo garaacday Chelsea